I-NCS FAQ yabantu abasha nabazali / ababheki - Element Society
Ngingayitholaphi uhlu lwamaphakheji?
Kuzokwenzeka kuphi uhlelo lwami?
Ngingayibhalisela i-NCS nabangani bami?
Ingabe izingcingo zivunyelwe kwi-NCS?
Ingabe intsha idinga ukuletha isikhwama sokulala?
Yikuphi ukudla okunikezwayo?
Uhlu lokupakisha lufakiwe ku-NCS Summer Summer / Autumn Guide esiyithumela kubantu abasha nabazali / ababheki abanendawo eziqinisekisiwe *. Sithumela lokhu cishe inyanga eyodwa ngaphambi kokuqala kohlelo.
Uma ungakamukeli umhlahlandlela wakho we-NCS Summer / Autumn okwamanje, ungachofoza kusixhumanisi esingezansi ukuze ubone inguqulo ye-intanethi equkethe uhlu lokupakisha.
Umhlahlandlela we-NCS Summer 2017
Uvunyelwe ukuletha i-suitcase eyodwa nekhwama yosuku olulodwa nawe. Noma yiziphi izikhwama ezingeziwe kuzodingeka zishiye ngemuva, ngakho-ke sicela uhlale ngaphakathi komkhawulo wemithwalo. Sicela uzame ukugwema ukusebenzisa i-suitcase enkulu ngenxa yesikhala semithwalo esinqunyiwe.
Abantu abasha akufanele balethe izinto ezivinjelwe njengotshwala, noma yiziphi izidakamizwa ezingekho emthethweni, izinto ezingekho emthethweni, amapenki noma izikhali ku-NCS. Siyacela intsha ukuthi ihloniphe le mithetho njengoba kuzoba nemiphumela uma itholakele ukuthi ikhona noma iyiphi yalezi zinto.
Sicela wazi ukuthi asikwazi ukuqinisekisa izinto zomuntu siqu. Ngenxa yalesi sizathu, sincoma ukuthi ungalethe izinto ezingabizi ezingadingekile noma izinto eziyigugu.
Uhlelo ngalunye lwe-NCS lwenzeka ngaphakathi e-UK.
Eminyakeni eyedlule, abantu abasha baye baya ezindaweni ezifana neScotland, Cumbria, Kent neWales zeSigaba 1 sohlelo.
Izigaba ze-2 ne-3 zivame ukuhlala eduze nendawo yendawo yomusha, ngokuvamile zihamba emakhilomitha okuhamba ukusuka ekhaya noma esikoleni, kodwa lokhu kuyahluka futhi abantu abasha bangase baphinde baphume ekhaya.
Sizothumela amathayimithebula ngolunye ulwazi mayelana nezindawo eziqondile cishe inyanga eyodwa ngaphambi kosuku lokuqala lwehlelo ngalunye uma zonke izindawo ziqinisekisiwe.
Abahlanganyeli kuzodingeka bahambe endaweni yokuhlangana okuvame ngaphakathi noma eduze nendawo yabo. Sizobe sihlela ukuhamba ukuze sithathe abantu abasha kunoma yiziphi izindawo ezisekude. Abantu abasha nabazali babo noma abanakekeli banomthwalo wokuhlela ukuhamba kwabo emaphoyiseni okuhlangana kanye namaphuzu okubuyisa ngezikhathi eziboniswe ngesikhathi sokuhlela.
Abantu abasha bangabhalisa nabangani, futhi uma befaka usuku olufanayo endaweni eyodwa bese bekhetha ikhono elifanayo leSigaba se-2, banethuba elihle lokuba nesimiso esifanayo. Uma sebebhalisile bobabili, abantu abasha bangathintana nathi bacele ukuthi babe ohlelweni olufanayo noma bahlanganyele ekamelweni. Sizodinga ukwazi amagama omngani ngamunye futhi sizobe senza konke okusemandleni ethu ukuze sibheke lokhu. Nakuba singenakuqinisekisa lokhu, ukusayina ekuseni kuzokwandisa amathuba abo!
I-NCS iyindlela enhle yokuhlangana nabantu abasha nokwenza abangane abasha! Hlola ividiyo yethu lapha.
Abantu abaningi abasha bathola ukuthi noma bebekwe eqenjini elihlukile noma abavela kubangani babo, loluhlelo luzibophezela ukuhlangana nabantu abasha ngokusebenzisa imisebenzi yokwakha ithimba nokuthi umeluleki wabo omdala ungumuntu omuhle oncike lapho engaqiniseki. Sivumela kuphela inani elithile labantu abasha abavela kunoma yiluphi uhlelo lwesikole ohlelweni ngalunye, ngakho-ke lolu hlelo luyoba okokuqala abantu abaningi abasha bahlangana. Kuwo wonke uhlelo, ikakhulukazi ekuqaleni, kuyoba nemidlalo eminingi yeqembu kanye nezinqamu zeqhwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi wonke umuntu uyazi omunye umuntu osemusha eqenjini lakhe.
Ngaphezu kwalokho, intsha eningi ithi enye yezingxenye ezinhle kakhulu ohlelweni lwe-NCS yayihlangana nabantu abaningi abasha futhi benza abangane abasha. Chofoza lapha ukuze ubone okunye okuhlangenwe nakho kwethu kwabahlanganyeli. Asikwazi ukunikeza ulwazi mayelana nokuthi yiliphi iqembu elisha elizofakwa kulo, njengoba amaqembu ohlelweni ngalunye abelwe kuphela izinsuku ezimbalwa ngaphambi kosuku lokuqala lwenqubo. Abantu abasha bayothola ukuthi yiliphi iqembu ababenalo ngosuku lokuqala lohlelo.
Sicela uqaphele ukuthi indawo yokuhlala kwi-NCS yizobulili ezingashadile ngakho-ke asikwazi ukwamukela izicelo zokwabelana ngamakamelo kubantu abasha abashadile abahlukene.
Ingabe amafoni avunyelwe ohlelweni lwe-NCS?
Abantu abasha bavunyelwe ukuletha amafoni abo (kanye namashaja) abo ohlelweni lwe-NCS futhi bazokwazi ukuwasebenzisa uma imisebenzi engenziwanga (ukusebenzisa amafoni weselula ngesikhathi sokusebenza akuvumelekile). Sicela uqaphele ukuthi kungase kungabi njalo ukutholakala kwefoni yeselula, ikakhulukazi phakathi neSigaba 1 esivame ukusekelwa emaphandleni.
Zonke izindawo zethu zokuhlala ziza nezinsiza ezidingekayo, njengokufinyelela kwamasokhethi emandla, izikhumba, njll. Kungakhathaliseki uhlobo lokuhlala ohlelweni lwabo oluthile, abahlanganyeli bayoba nokufinyelela kwamasoksi amandla futhi ngakho kufanele bakwazi ukukhokhisa amafoni abo. Ukufinyelela kungalinganiselwe indawo yokuhlala yokuhlala.
Sicela uqaphele ukuthi asikwazi ukuqinisekisa izinto zomuntu ezincane kangaka ezenza amafoni awo omakhalekhukhwini azenzele engozini yazo.
Cha, abantu abasha abadingi ukuletha isikhwama sokulala. Zonke izindawo zethu zokuhlala ziza nokulala, kufaka phakathi indawo yokuhlala kanye nama-yurts. Siphinde sihlinzeke ngamabhedlele ekamu lokulala abantu abasha ababamba iqhaza phakathi kweNgxenye 1.
Konke ukudla nokuphuza kuzohlinzeka ngezikhathi zokuhlala zalolu hlelo (lapho abantu abasha behlala ekhaya). Udinga kuphela ukuletha ukudla kwasemini ngosuku lokuqala lweSigaba 1 (no-Phase 2 kuye ngezinhlelo, sicela uhlole isikhathi sakho).
Uma nje sitshelwa ngezidingo zomuntu osemusha kusengaphambili, singanikeza ukudla okukhethekile okudingekayo kokudla okudingekayo, kuhlanganise ne-halal, i-kosher, i-vegetarian, i-vegan, ne-gluten-free, nokudla okuhlukahlukene kokudla. Nazi izibonelo zokudla ezitholakalayo ngesikhathi sezingxenye zokuhlala. Izinketho zizohluka:
Isigaba 1 (ukuhlala):
Sicela ulethe ukudla kwasemini okuphambili ngosuku lokuqala. Ukudla okuphezulu kakhulu kunikezwa isikhungo somsebenzi wangaphandle.
Ukudla kwasekuseni: ukudla kwasekuseni okuphekwe, iphalishi
Usuku lokudla: amasangweji, i-crisps, izithelo
Isidlo: ukudla okushisayo (isib. Pasta, i-pizza, i-curry, i-chilli), isaladi, i-dessert
Isigaba 2 (ukuhlala)
Hlola isikhathi sakho sokuhlela ukuze ubone ukuthi udinga ukuletha ukudla kwasemini ngosuku lokuqala. Ukudla kuhlinzekwa yi-The Challenge futhi abantu abasha bayokwazi ukuzipheka njengengxenye yokuphila kwabo abazimele.
Ukudla kwasekuseni: okusanhlamvu, isobho
Isidlo: Ukukhethwa kokudla okushisayo okhethiwe futhi okuphekwe njengeqembu (isb. Ama-sausages namazambane ahlambulukile, i-stir-fry, i-pizza)
Isigaba se-3 (esingewona indawo yokuhlala)
Sicela ulethe eyakho ukudla kwasemini. Ukudla akunikeziwe.
Isigaba 1 (ukuhlala)
Izigaba ze-2 ne-3 (izinsuku zokusebenza, ukuhlala ekhaya ebusuku)
Bazophi lapho abantu abasha belele khona ngezikhathi zokuhlala?
Kwenzekani kuLusuku Lolwazi?
Kubiza okungakanani ukufaka ingxenye ku-NCS?
Ingabe abanye abantu abasha abazoqhubeka nalo hlelo banokuziphatha okunzima?
Ubani ozobangela abantu abasha emhlabathini?
Ingabe ukuhlanganyela kwi-NCS kungaphazamisa izifundo zami zentsha?
Ngifaka kanjani ingane yami?
Kukhona izinketho zokuhlala ezikhona phakathi kwe-NCS (isibonelo, amakamelo okulala ahlukene, amatende, ama-yurts, njalonjalo), kanti indawo ethile yokuhlala kuzohluka ngohlelo. Imininingwane yokuhlala nezindawo zohlelo ngalunye kuzothunyelwa kubahlanganyeli cishe inyanga eyodwa ngaphambi kosuku lokuqala lwenqubo.
Indawo yokuhlala igcinwa ngesikhungo sokusebenza esingaphandle, esikhungweni seyunivesithi noma omunye umhlinzeki wendawo yokuhlala futhi kukhona izici zokuphepha endaweni lapho ukugcina izakhamizi zayo ziphephile ngangokunokwenzeka. Abahlanganyeli abesilisa nabesifazane bahlukaniswa ukuhlala okulinganayo ngokobulili futhi abavunyelwe ukungena emakamelweni abanye.
Indawo yokuhlala inezinsiza ezidingekayo ezifana nokufinyelela emanzini kanye nezihlalo zamandla. Ezinye izindawo zokuhlala, ezihlanganisa izindlu zokugeza, zingabelwa nabanye abantu abasha kodwa kuzoba nabahlanganyeli bobulili obufanayo.
Nakuba kungekho isikhathi esinqunyiwe sokuthi abantu abasha badinga ukulala, bonke abantu abasha kumele bahlale endaweni yabo yokuhlala yi-10.45pm. Sincoma ukuthi abantu abasha balele ubuthongo obuhle ukuze bajabulele ngokugcwele imisebenzi yezinsuku ezilandelayo!
Izinhlelo eziqala ngamaholidi ehlobo:
Phakathi neSigaba 1, abantu abasha bahlala esikhungweni somsebenzi wangaphandle emaphandleni. Uhlobo lokuhlala luyohluka. Kungenzeka kube izibhedlela, ngehambo lokulala ebusuku, kodwa futhi kungaba ngamatende noma ama-yurts. Imininingwane yohlelo ngalunye izothunyelwa kubahlanganyeli cishe inyanga eyodwa ngaphambi kosuku lokuqala.
Phakathi neSigaba 2, abantu abasha bayothola ukuphila okuzimele ngokuhlala kude nokupheka ukudla kwabo. Futhi, ukuhlelwa kwezindlu kungashintsha (isibonelo, kungenzeka kube indawo yokuhlala yesitayela semayunivesithi noma amatende noma ama-yurts), nemininingwane yohlelo ngalunye izothunyelwa kubahlanganyeli cishe inyanga eyodwa ngaphambi kosuku lokuqala kohlelo. Phakathi neSigaba 3, abantu abasha bayohlala ekhaya ebusuku ubusuku bonke.
Izinhlelo eziqala phakathi nesikhathi seminyaka:
Phakathi neSigaba 1, abantu abasha bayohlala esikhungweni somsebenzi wangaphandle emaphandleni. Uhlobo lokuhlala luyohluka. Kungaba yimibhoshongo, ngehambo lokulala ebusuku, noma kungaba yurts (amatende ajikelezayo), noma indawo yokuhlala yokuhlala. Imininingwane yohlelo ngalunye izothunyelwa kubahlanganyeli cishe inyanga eyodwa ngaphambi kosuku lokuqala. Zonke izidingo ezidingekayo, njengamanzi asezikhunjini namanzi, zizotholakala. Phakathi naso sonke isimiso (Isigaba 2 ne-3), abantu abasha bayohlala ekhaya ebusuku.
Ukwaziswa kusihlwa kuyithuba labahlanganyeli nabazali noma ababheki ukuthola ulwazi oluningi mayelana ne-NCS futhi babuze noma yikuphi imibuzo abangaba nayo mayelana nohlelo. Futhi kuyithuba lokuba bahlangane nabanye abantu abasha abazohlanganyela ohlelweni olufanayo, nabazali babo noma abaqaphi.
Sizokuthumelela isimemo soLwazi Lwebusuku uma indawo iqinisekisiwe. Ngokuvamile kubanjwe amasonto e-2 ngaphambi kohlelo luqala. Sincoma ukuba uhambe njengabahlanganyeli abedlule bakutholile kuwusizo kakhulu, akudingeki ukuba kube njalo. Kunoma yikuphi, sizokuthumelela umhlahlandlela ocacile we-Summer / Autumn cishe inyanga eyodwa ngaphambi kosuku lokuqala kohlelo nge-imeyili noma ngeposi, ngokuvamile kuye ngokuthi okuthandayo okukhethiwe kulesi sicelo.
Sikholelwa ukuthi bonke abaneminyaka engu-15-17 efanelekile kufanele bahlanganyele ku-NCS futhi kuyinzuzo enkulu yemali. UHulumeni utshala ngaphezulu kwe-£ 1,000 ngomhlanganyeli ukuze siqinisekise ukuthi lolu hlelo alukhokhisi imali engaphezulu kwe-£ 50 yokuphatha, noma ngabe usebenzisa nge-NCS The Challenge noma i-NCS Trust. Abahlanganyeli bachithe isikhathi esivela ekhaya nabo bonke imisebenzi ehlanganisiwe. Lokhu kuhlanganisa indawo yokuhlala, ukudla (lapho isigaba sokuhlala) kanye nemishini.
Sivame ukunikeza izipesheli ezikoleni esizivakashelayo. Uma unemibuzo mayelana nokusiza ngezezimali noma ukukhokha sicela uxhumane nathi.
Inselelo ihlose ukusekela labo abanokuziphatha okunzima ukubavumela ukuba bahlanganyele futhi bazuze okuhle ku-NCS.
Njengokuphepha kwethu okuyinhloko, sibukeza uhlelo lokusebenza lomuntu osemusha, ikakhulukazi ukunakekelwa kolwazi lwezokwelapha nolwesekwa olunikeziwe.
Uma sitshelwa ukuthi umuntu osemusha unenkinga ngokulandela imithetho ecacile nemingcele, sizoxhumana nomzali noma umlondolozi ukuxoxa ngalokhu. Kwezinye izimo sizoxhumana nezikole, ochwepheshe noma ezinye izazi ukuze uthole olunye ulwazi. Sifika esinqumweni somuntu osemncane nokuthi singase sisekele kangakanani ku-NCS. Uma kudingekile, sizobeka abasebenzi abengeziwe esikhundleni somuntu omusha.
Kuzo zonke izimo, sizokwenza abasebenzi abathintekayo bazi noma yikuphi ukuziphatha okunzima ukuze bakwazi ukusekela lo mfana, kanye neqembu lonke. Sinekhodi yokuziphatha. Sichaza lokhu kubantu abasha ekuqaleni kohlelo futhi silindele ukuba balandele. Ikhodi yokuziphatha iqukethe imithetho ephathelene nokuziphatha esikulindele kulolu hlelo, kuhlanganise nemithetho yokuphepha, umthetho, nokuhlonipha nokufaka abanye abantu.
Uma umuntu osemusha ehlukumeza ngokweqile ikhodi yokuziphatha, abasebenzi bayohlola isimo bese benquma ngesenzo esifanele kakhulu. Kwezinye izimo, singase sicele lo musha ukuthi ashiye uhlelo.
Ukuphepha nenhlalakahle yabahlanganyeli kubaluleke kakhulu. I-NCS inikezwa ngaphesheya kwe-England naseNyakatho ye-Ireland ngenethiwekhi yokuhlangenwe nakho kwezintsha nezinhlangano zomphakathi ezibandakanya izinsizakalo, i-consortia ekolishi, umsebenzi wokuzithandela, umphakathi, ibhizinisi lomphakathi (VCSE) kanye nokusebenzisana komkhakha wangasese. Abasebenzi be-NCS bahlolwe i-DBS (ngaphambilini i-CRB) futhi banokuqeqeshwa okufanele ukusebenzisana nabantu abasha.
Yonke imisebenzi iqondwa ingozi futhi iqondiswa ngabaqondisi nabaqeqeshi abaqeqeshwe ngokucophelela futhi lolu hlelo luyimfanelo eqinisekisiwe endaweni kanye nasezweni.
Ingabe ukuhlanganyela ne-NCS kungaphazamisa izifundo zami zemfundo yobudala?
Cha. Uhlelo lwehlobo lwe-NCS luyenzeka emaholide ehlobo. I-autumn yethu ekwindla kanye nezinhlelo zentwasahlobo zingase zenzeke nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi ekwindla noma entwasahlobo iholide lesigamu lesigamu.
Uhlelo lwehlobo lwe-NCS luhlala emaholide ehlobo. I-autumn yethu ekwindla kanye nezinhlelo zentwasahlobo zingase zenzeke nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi ekwindla noma entwasahlobo iholide lesigamu lesigamu.
Ngithola kanjani ingane yami iqhaza?
Ingane yakho ingabhalisa intshisekelo yabo yokubamba iqhaza ngokusebenzisa ikhasi lokubhalisa kwiwebsite yethu noma ngokubiza i-0114 2999 210 noma ngokuthumela i-NCS imenenja yethu, uRichard ku-richard.r@element.li
Uma ukubhaliswa sekuphelile, sizokuthumela imininingwane eminingi mayelana neprojekthi ethize ababhalisele yona.